5 zavatra tsy maintsy fantatrao momba ny Certification CCNA Certification | NY
5 zavatra tsy maintsy fantatrao momba ny Certification CCNA Certification
Inona no fanamarinana CCNA?
Ny karazana lohahevitra dia ampahany amin'ny mari-pahaizana CCNA CNSco?
Inona no lanjan'ny fanadinana Cisco CCNA Certification?
Aiza no ahafahako mahita ireo mpitarika fianarana CCNA maimaim-poana?
Ahoana ny fomba hiomanana amin'ny fanadinana Certification CCNA?
Ny fotoana sy ny asa mazoto dia manamboatra mari-pahaizana matihanina dia miafara amin'ny fahazoan-tombony amin'ny fotoana maharitra. Cisco CCNA Certification dia iray amin'ireo fandaharan'asa izay afaka manampy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo olona ao amin'ny faritany iray manokana ary mahatonga ny fiantsoana fanohanana amin'ny sehatra manaraka.
Ny CCNA dia voafintina ho Cisco Certified Network Associate, fandaharanasa fanamarinana ny tenany manokana. Raha misy ny olona nahazo ny fahaiza-manao, dia heverina ho mahomby amin'ny fitantanana ny rafitra sy ny fahaiza-manao izy ireo.
Ny fanamarinana ny fanamarinana dia voamarina sy nomena tamin'ny orinasa Cisco matihanina. Raha mandinika ny fomba ankapobeny ny indostrian'ny indostria dia mandamina fandaharam-potoana, dia nahazo fahabangana goavana teo amin'ny manam-pahaizana momba ny teknolojia ny fahaiza-manao ary anisan'ny taranja fandaharana fanamarinana malaza indrindra.
Raha efa nandritra ny roa taona izao ny fandaharana, ny Cisco Organisation izay ao ambadik'io fandaharanasa fanamarinana io dia manohy ny fampivoarana sy ny fanovana ny lohahevitra miaraka amin'ny tanjona fa izy ireo dia mifanaraka kokoa amin'ny fanovana ny indostrian'ny indostria.
Nisy famerenana an-dalam-pandrosoana natao tamin'ny taona 2013 rehefa nanangana sehatra samihafa momba ny asa manokana izy ireo izay ahafahan'ny matihanina manana fahaizana manokana amin'ny sehatra manokana. Ny habetsaky ny 9 samihafa CCNA dia azo jerena amin'izao fotoana izao ary azonao atao ny mifidy lohahevitra manokana ao an-tsaina amin'ny tanjona manaraka anao.
CCNA Cloud - Ny lohahevitra dia mifantoka amin'ny fivoaran'ny rahona, ny fiompiana ary ny fandrindrana ny rahona Cisco. Miaraka amin'ny famolavolana ny rahona mahasamihafa azy, dia heverina ho loharanom-baovao manan-danja amin'ny mpitsabo maro.
CCNA Collaboration - Ireo mpitsabo miasa ao amin'ny fifandraisana IP, ny fikarakarana saha dia afaka misafidy ny fiaraha-miasa izay taratra lavitra ho an'ny fanavaozana samihafa mifandraika amin'ny feo, ny angona, ny horonan-tsary ary ny fampiharana portable.
CCNA Cyber ​​Ops - Ny fanamarinana rehefa vita dia manondro mpahay matematika iray izay tompon'andraikitra amin'ny fiarovana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fiarovana ny fiarahamonina.
CCNA Data Center - Ireo lohahevitra napetraka tamin'ity fanadinana manokana ity dia ahitana ny fananganana foibe momba ny angona, ny fandaminana ny rafitra, ny fitantanana ny angon-drakitra, ny fitazonana fitaovana sy ny fitaovana.
CCNA Industrial - Ny fanamarinana dia manome fahafahana ny olona hahatakatra ny fitantanana sy ny asa momba ny orinasa izay ilaina mba hanatanterahana fototra ara-indostrialy, anisan'izany ireo solika, gazy, angovo ary ny toerana fanangonana.
CCNA mivezivezy sy fifandimbiasana - Ny lohahevitra afovoan'ny Cisco dia mifantoka amin'ny - ny tena ilaina dia manana ny mari-pahaizana ho an'ny rafitra rehetra ary ny fanandramana fototra izay azon'ny mpanafika rehetra atao.
CCNA Security - Ny olona namita ity fandaharam-potoana ity dia voamarina fa manana fampahalalana ampy amin'ny fiarovana ny angon-drakitra, amin'ny fandinihana ny fahafahany miditra, mizara ary afaka manampy amin'ny famolavolana fototra voaaro azo antoka ho an'ny orinasa iray.
CCNA Service Provider - Ny fianarana dia vita amin'ny olona izay miasa ho mpitsangatsangana ho manam-pahaizana momba ny rafitra mba hanampy ny fikambanana ho toy ny serivisy. Mba hamaranana ny fianarana, mitaky fahaiza-manao tena miavaka izy ireo ary mivadika ho matanjaka amin'ny rafitra ankehitriny ao amin'ny fitantanana ny rafitra.
CCNA Wireless - Ny fampivoarana ny fitantanana ny fitantanana ny filaminana rehetra dia ahazoana antoka fa rehefa vita ny fikarakarana dia azo atao tsara ity test ity. Izy ireo no miandraikitra ny fandaminana, manara-maso ny kalitaon'ny mari-pamantarana ary mametraka rafitra fiarovana azo antoka.
Ny CCNA Certification tsirairay dia tokony hiezaka manokana. Cisco dia manana fandaniana CCNA fitsanganana amin'ny $ 295 isaky ny fanadinana. Ny fitomboan-kevitra dia mety mitodika any amin'ny distrika izay iainanao, manova tarehimarika sy dikan-javatra samihafa. Mahafinaritra ny manamarina ny tranonkala ofisialy alohan'ny hangatahanao ny fanadinana.
Fikarohana malalaka Mpianatra momba ny fianarana CCNA Tsy toy ny olana mety hitranga ny Internet. Misy ny voka-dratsiny sy ireo mpanome tolotra fitsapana izay afaka hanome ny loharanom-bola maimaim-poana rehetra.
Raha toa ny sasany amin'ireo toro-lalana ireo dia azo jerena ety anaty aterineto ho fifandraisana downloadable, eo YouTube ary amin'ny alalan'ireo tranonkala fitarihana amin'ny fahefana, dia afaka manaiky koa ianao manaiky tetik'asa maoderina atolotry ny fikambanana lazaina. Ny fandraisana andraikitra hanaiky ny fianarana toy izany dia manampy amin'ny fahazoana farany Mpianatra momba ny fianarana CCNA toy ny tsy manan-danja amin'ny vola sy ny fanampiana matihanina amin'ny mpampiofana izay nahavita ny tetik'adin'ny Cisco.
Alohan'ny handramanao fitsapana dia zava-dehibe ny mahatsapa fa tsy misy ny fahaizana fototra tokony hizarana ny fitsapana ho an'ny fanantenana. Na izany aza, ny CCNA mivezivezy sy mifamadika dia ny fototry ny fifanarahana tsirairay. Heverina ho tsy dia mitaky be loatra ary mety hanampy anao hanazava ireo fanadinana mavesatra kokoa.
Amin'ny sehatra fizahan-tany sivy miavaka, ny fahasamihafana amin'ny fanadinana ny fanadinana dia miankina amin'ny fomba tena niainanao tany amin'ny faritany.
Ny kilasy fianarana CCNA sy ny modules dia fototry ny fahazoana tsara kokoa ny fandaharam-pianarana alohan'ny hanaovana fanandramana
Eny tokoa, na ny manam-pahaizana momba ny IT izay manana fotoana be dia be aza ny fandraisana anjara eo amin'ny sehatra dia tokony handinihina ireo mpitari-dalana mahomby ary hahatakatra ny famolavolana fanadihadiana. Izany dia ahafahan'ny olona iray mahafeno ny fepetra voalohany.
Manaova fanadinana maro samihafa, io no fomba soso-kevitra indrindra. Izany dia manampy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaonao, hampita haingana ny valinteny ary hametraka anao amin'ny fandraisana ny faran'ny fitsapana nandritra ny taona fa tsy mahatsiaro ho manahy.
Ny fitsapana dia tarihina amin'ny ampahany 1000 izay mampiakatra ny tokony hoentinao 825 mba hahafeno fepetra.
Raha kely indrindra dia tokony handany andro isan'andro ny 30 mba hampiasana boky tsy arak'izay fianarana ipotématique ny fototra ijoroanao CCNA fanamarinana. Arakaraky ny tsy fahafahanao mahita ny iray amin'ireo olana manahiran-tsaina, mandinika ny fametrahana angovo bebe kokoa na tafiditra ao amin'ny orinasa fanomanana azo itokisana. Fantaro ireo fitsapana maimaim-poana ao amin'ny tranonkala ary andramo herinandro izy ireo.
Mifanohitra amin'ny programa fanamarinana matihanina maro hafa, ny CCNA nataon'ny Cisco dia heverina ho sahiran-tsaina amin'ny antony ilàna ny olona hanana be dia be eto an-tany ary koa fampahalalana ara-pihetseham-po ao anatin'ny sehatr'izy ireo. Na ahoana na ahoana, rehefa manolo-tena ianao hahatakatra ny hevitra sy maka aina famolavolana tsy tapaka, dia mora kokoa ny mamaly fanontaniana amin'ny tena fitsapana.
Ankoatr'izay, ireo fikambanana tena izy manerana an'izao tontolo izao dia mikatsaka hatrany ireo mpikarakara ny fiantohana antoka mba hiaraka amin'ny vondrona misy azy ireo. Anjaran'ny drafitra fitantanana drafitra drafitra, ny filaminana fiarovana na ny mpitantana foibe momba ny serivisy, ny ampahany betsaka amin'ny ampahany amin'ny asa dia manome safidy lehibe. Ny tetikasam-pampandrosoana sy ny fivoaran'ny asa izay nomen'i a CiscoCCNA Certification Tena manara-dalàna ny fotoana lanonana amin'ny fametrahana ny tenanao ho an'ny fanadinana.
What's New in Cisco Data Center - CCNA Data Center
Top 10 Cloud Certifications ho an'ny 2018